Wikipedia:Bogga wadahadalka - Wikipedia
Arrimo muhim ah
Samaynta maqaal cusub
Faylasha ku jira
Dhamaan dadka ka qoran qaybtaan
Bogga wadahaalka wuxuu ka mid yahay bogagga gaarka ah ee habka Wikipedia waxana loo adeegsadaa in looga wadahadlo mowduuc gaar ah ee bogga wadahadalka. Maqaal kasta ama mowduuc ku jirya Insykalobeedhayaha Waxa uu leeyahay bog wadahadal. ee wax lagu qori karo bogga wadahadalka adigoo gujinaya "wadahadal" ee ku yaal halka sare ee bogga, kadibna aad qorto aragtidaada, ee ku saabsan su'aashaada ama faaladaada halka waxa lagu qoro kadibna guji bedel bogaan bogga halkiisa sare.
2 Wadahadalka isticmaalaha
Adeesiga[wax ka badal xogta]
Bogga wadahadal waa meel horumarineed ee maqaalada, laakiin ogsoonoow bogga wadahadalka waa mid ku saabsan maqaalka (mowduuca meesha yaal wax kale maya).
Soo jeedin iyo ra'yi iyo su'aal cidii ka dhiidhisa ayaa adeegsatada bogga wadahadalka, sidoo kale bogga wadahadalka waa meel ah tillaabada koowaad ee lagu xaliyo isqabqasiga ama khilaaf ku saabsan maqaal uun.
Wadahadalka isticmaalaha[wax ka badal xogta]
Isticaale kasta waxa uu leeyahay bog wadahadal ee ugaar ah bogaana waa tusaale ku filan. Tusaale ahaan, Waxaa jira link ah bogga wadahadalka ee ugaar ah isticmaalaha ee ka muuqda dhinaca magaca isticmaalaha hadii uu ka diiwaan gashanyahay system ka. sidoo kale qoraalka ah "waxaa kuu taal farriin cusub" ee kasoo muuqanaysa halka sare eebogga hadii qof uu kuu dhaafo farriin boggaada wadahadalka. waxaa suurtagal ah adeegsiga bogaggaan in ay kuwada hadalaan xobnaha, laakiin xusuusnoow bogaggas waa kuwa guud, sidaa daraadeed waxaa wanaagsan adeegsiga farriinta e-mailka haddii aad doonto inaad kula xiriirto isticmaalaha si gooni ah.
Habka[wax ka badal xogta]
Wikipedia wuxuu lug ku leeyahay Media wiki. Waxa uu adeegsadaa laba dhibcood ":" sadarka billoowgiisa adigo raacinata affar caalamadood ee saxiixa.
Maqaalkaan ma fiicanyahay si loogu doorto mid ah xul? ----~~~~
:Waa wax fiican!! --~~~~
::Ma xuma. --~~~~
Waxaan uwareejinayaa wadahadalka [[Wikipedia talk:Iskaashiga usbuuca/Maxaal xul ah]]. --~~~~
waxaa soo baxaysa:
Maqaalkaan ma fiicanyahay si loogu doorto mid ah xul? --Abshirdheere
Waa wax fiican!! --Maax
Ma xuma. --Abshirdheere
Wikipedia talk:Iskaashiga usbuuca/Maxaal xul ah]]. --Maax
Sidoo kale eeg[wax ka badal xogta]
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia:Bogga_wadahadalka&oldid=127252"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 17 Febraayo 2014, marka ee eheed 15:22.